Tuesday May 08, 2018 - 20:18:37 in Wararka by
Wadanka Lubnaan waxaa lagusoo gaba gabeeyay doorashooyinkii Baarlamaaniga ee dhacay shalay xilli xiisado siyaasadeed uu lubnaan marti gelinayay tobankii sanadood ee lasoo dhaafay.
Muddo Sagaal sanadood kadib ayay xukuumadda dabadhilifka ee ka jirta magaalada Beyruut waxay qaban qaabisay doorashooyin baarlamaan oo ay dusha sare ka eegayeen dowlado katirsan midowga Yurub iyo ururo reergalbeed ah oo ku lug leh xasaradaha siyaasadeed ee wadankaasi ka taagan.
Wararka ka imaanaya Lubnaan waxay sheegayaan in lasoo gaba gabeeyay doorashooyinka baarlamaaniga waxaana jira guul darrooyin lama filaan ah oo ay lakulmeen axzaabta siyaasadda ee kasoo jeeda dhanka sunniyiinta.
Taageerayaasha iiraan ee wadanka lubnaan ayaa guulo waaweyn kasoo hooyay doorashooyinkii shalay dhacay.
Ururka isku magacaabay xisbullaah ayaa ku dhawaaqay in uu helay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka cusub tallaabadaas oo farxad gelisay garabyada iiraan ee mandiqadda.
Taageerayaasha xisbiga ayaa isugusoo baxay koonfta magaalada caasimadda ah ee beyruut,albiqaac iyo deegaannada xuduud beenaadka ku dhow halkaas oo ay ka dhigayeen dabaal degyo ay farxad ugu muujinayaan guusha ay gaareen.
wariyaal ayaa soo sheegay in aroornimadii hore ee saaka waddooyinka magaalada Beyruut lagu arkayay siyaasiyiin wajigayooda laga dheehan karay qoomamo ku aaddan wixii shalay dhacay.
Siyaasiyiinta Xisbiga Almustaqbal ee uu hoggaamiyo Sacad Alxariiri R/wasaaraha wadanka waxayna heleen kuraas baarlamaan oo aad uyar waxayna khasaariyeen illaa 33 Kursi waana markii ugu horraysay oo khasaara intaan la eg kala kulmaan doorashooyinka Baarlamaaniga ah.
Alxariiri oo hadlayay ayaa qiray in xisbigiisu khasaara xooggan kala kulmay doorashadii shalay balse wuxuu diiday in uu guul darro ka hor qirto warbaahinta isagoo si maldahan u sheegay in laysku dayay in xisbigiisa siyaasadda laga fogeeyo.
dhawaq kaasi ka wadun wuxuu kasoo yeeray xasan Nasrullaah oo ah hoggaamiyaha Ururka xisbullaah isku magacaabay, khudbad uu ujeediyay taageerayaashiisa ayuu waxa socda ku sifeeyay mid garab iyo gaashaan u ah wax uu ugu yeeray muqaawamada oo uu ula jeedo mashruuc ka dhanka ah muslimiinta sunniga ah ee maleeshiyaadkiisu ka wadaan wadanka Suuriya.
20-kii sanadood ee lasoo dhaafay muslimiinta sunniga ah Lubnaan waxay cadaadis kala kulmayeen shiicada rawaafidda ah iyo nasaarada waxayna muslimiintaas qarka usaaranyihiin in ay noqdaan Aqalliyad kadib markii ciidanka sirdoonka iyo melleteriga ay muslimiinta kala gaabiyeen iyagoo ku gambanaya mashruuca loogu magac Argagaxisa ladirirka sidoo kale waxaa xabsiyada lagu guray culimaa'udiinkii sunniga ee raddin jiray shubahaadka shiicada taas oo xisbul iyo mushrikiinta iiraan fursad usiisay in ay sii faafiyaan baadilka.